အောင့်နမ်းရအောင် အစိုးရက ချစ်သူလား - Kanbawza Tai News
Home ဆောငျးပါး အောင့်နမ်းရအောင် အစိုးရက ချစ်သူလား
အောင့်နမ်းရအောင် အစိုးရက ချစ်သူလား
August 16, 2019 ဆောငျးပါး,
၂ဝ၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် က 'ရပ်မနေပါနဲ့ ကူ၍ မဲပေးကြပါ' ခေါင်းစဉ် နဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ မဲပေးပိုင် ခွင့်ရှိသူတိုင်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မဲရုံရှိရာသွား ပြီး မဲပေးဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေး ပါ။ အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာ မှာ ပြည်သူတွေရဲ့အား အဓိက လိုအပ်တာဖြစ် တဲ့အတွက် ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ရေး သားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုင်းအတာ သက် ရောက်မှု ဘယ်လောက်ထိ ရှိတယ်ဆိုတာ မသိ ပေမယ့် ဂျာနယ်စာမျက်နှာပေါ်က စာမူဖတ်မိတဲ့ မိတ်ဆွေတချို့တော့ ရပ်နေဖို့ စိတ်ကူးတွေ ပြောင်းပြီး မဲရုံရှိရာကို မဲသွားပေးဖြစ်တယ်လို့ဆို ကြပါတယ်။ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့ လှိုင်းလုံး ကလည်း ပြည်သူတွေကြားမှာ ကြီးကြီးမားမား ရိုက်ခတ်မှု ရှိနေတော့ ရပ်နေမယ့် မဲဆန္ဒရှင်အ တော်တော်များများ အပြောင်းအလဲအတွက် မဲ ပေးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတွေရဲ့ လက်သန်းတွေ မှင်စွန်းမှု အကျိုးရလဒ်အဖြစ် NLD ပါတီ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာသောင် ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရပြီး အစိုးရတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အာဏာရပါတီရဲ့ သက် တမ်းဟာ ၄ နှစ်အတွင်း ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဘက်ပေါင်းစုံ အကျပ်အတည်းတွေကြားက အစိုးရ တစ်ရပ် ဖြစ်လာတဲ့အတွက် NLD အစိုးရ အနေနဲ့ အခက်အခဲပေါင်းစုံ ကြုံရမယ် ဆိုတာလည်း မြေကြီးလက် ခတ်မလွဲပါ။ အစိုးရ မှန်သမျှ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းက လွတ် ကင်းနေတဲ့ အစိုးရဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ် မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံ အစိုးရမှန်သမျှ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အ ကောင်းဆုံးနဲ့ အသိမ်မွေ့ဆုံးရင် ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အစိုးရကို ပြည်သူတွေက အစိုးရကောင်းတစ်ရပ်လို့ သတ်မှတ်ရှုမြင်တတ်ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလို နိုင်ငံ့ရေးရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ နိုင်ငံမှာ အစိုးရ တစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည်ရတာ လွယ်ကူတဲ့ အ နေအထားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မတော် ပါဝင် အခန်းကဏ္ဍက ကြီးမားနေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရနှစ်ရပ် အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံလို့တောင် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား နယ်မြေတွေနဲ့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရကြားမှာ လည်း ကွဲလွဲတဲ့ သဘောထားတွေ ရှိနေသေးတဲ့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရတစ်ရပ် အဖြစ် တာဝန်ယူရတာြ<ွကပ်ြ<ွကပ်အိတ် ခေါင်းစွတ်ပြီး အသက်ရှူတယ်လို့ ဆိုရမယ့်အတိုင်းပါ။ အသက် တော့ ရှူရပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်တစ်ဝလေရှူ ခွင့်မရတော့ နိုင်ငံ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေက ထိုက်သင့်သလောက် ကောင်းမွန်တိုးတက်လာ ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုအကြောင်းချင်းရာပဲဖြစ် ဖြစ် အစိုးရတစ်ရပ်အဖြစ် တာဝန်ယူမှု ရှိလာပြီ ဆိုရင်တော့ အစိုးရတာဝန် ကျြေ>ွပန်ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရှိမှ တိုင်းပြည်စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ ဆို ကြတယ်။ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ ၄ နှစ်တာ သက်တမ်း ကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ တစ်စိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်နေတာ တွေ့နိုင် ပါတယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရှိမှ တိုင်းပြည် စီးပွားရေး တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ် လို့ အလုံးစုံ လက်ခံထားရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးတိုးတက်လာစရာ အကြောင်းမမြင်ပါ ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုဆက် စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာ ထိုက်သင့်သလောက် လက် ခံလို့ရပေမယ့် အလုံးစုံ လက်ခံထားတာကိုတော့ အစိုးရ အနေနဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ့် အပိုင်း လို ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၊ တပ် မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းတွေကြားက အက်ကြောင်းတွေ ရင် ကြားမစေ့သရွေ့တော့ အဓိကနစ်နာနေရတာက အောက်ခြေ ပြည်သူလူထုတွေပါ။
''ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးရမယ့် အချိန်တုန်းက ကျွန်တော်ဆိုက် ခေါင်မှာ ရောက်နေတာ။ ကျွန်တော် မဲပေးရမယ့် စာရင်းက တောင်ကြီးက အမေတို့ အိမ်ထောင် စုစာရင်းထဲမှာ ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲအတွက် မဲပေးချင်လို့ ကျွန်တော်တောင်ကြီး တက်လာ ပြီး မဲပေးတယ်။ ပေးရမယ့် မဲရုံကိုလည်း မနက် အစောကြီးတည်းက ရောက်အောင် သွားတယ်။ ဘဝမှာ အဲဒီတစ်ခါ ပထမဆုံး အကြိမ်မဲပေးဖူး တာဆိုတော့ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ ပါတီကို အမှား အယွင်း မရှိပေးနိုင်အောင် တော်တော်ဂရုစိုက် ပြီး ပေးခဲ့ရတာပါ။ အပြောင်းအလဲ လိုချင်လို့ မဲပေးခဲ့တာဗျာ။ လက်ရှိ ၄ နှစ်အတွင်း မြင် တွေ့နေရတဲ့ အနေအထားက ပြည်သူတွေအ တွက် အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တာ တစ်ခုမှ မတွေ့သေးဘူး။ လာမယ့်ရွေးကောက် ပွဲကျရင် ဘယ်ပါတီကို ယုံစားပြီး မဲပေးရမှန်း တောင် မသိတော့ဘူး'' လို့ ခွန်အောင်ခမ်းက သူ့အမြင်ကို ပြောပါတယ်။
ပြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခွန်အောင်ခမ်း ပြောကြားချက်အရ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ အမြဲလို တွေ့ရတဲ့ အစိုးရရဲ့ ပြည်သူ့အတွက် တစ်နှစ်တာ ဆိုတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေက အမှန်တကယ် ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်း ရှိရဲ့ လားဆိုတာ တွေးတောချင့်ချိန်စရာ ဖြစ်လာပါ တယ်။ အခြေခံပြည်သူဆိုတာ အစိုးရတစ်ရပ် အမြင်လိုတော့ မြင်နိုင်မှာ၊ မြင်တတ်မှာ မဟုတ် ပါဘူး။ လက်တွေ့ကျကျ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြည် သူတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်အတိုင်းသာ မြင်တတ် ကြတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် တစ်ခွင်လုံးမှာ ရှိတဲ့ အောက်ခြေပြည်သူအား လုံး ဆင်းရဲကျပ်တည်းမှုဒဏ်ကို ခါးစည်းခံ၊ ရင် ကော့ခံ၊ ခေါင်းငုံ့ခံ၊ မခံချင်လည်း ခံနေရတာ အားလုံး အသိဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ အစိုး ရလက်ထက်မှာလည်း ထူးထူးခြားခြား ပြောင်း လဲလာအောင် လုပ်နိုင်ခြင်း မတွေ့ရသေးပါဘူး။
ဘာစနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ် ပြည်သူတွေ ကို ထမင်းဝအောင် ကျွေးနိုင်ရင် အုပ်ချုပ်လို့ရ တယ်လို့ အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တိန့်ရှောင်ဖိန်က ပြောခဲ့ဖူးပါ တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ကြည့် မယ်ဆိုရင် ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်နေတယ် လို့ သတ်မှတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးပိုင်း ဆိုင်ရာမှာတော့ တံခါးဖွင့်ဝါဒ (Open Market) ကို စနစ်တကျ ကျင့်သုံးတဲ့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တရုတ်ပြည်သူတွေကို ထမင်းဝအောင် ကျွေးထားနိုင်တာ အနီးစပ်ဆုံး သက်သေ သာဓကတစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါ။ တရုတ် ပြည် အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ အခု လို ကမ္ဘာ့အဆင့် တစ်နေရာမျက်စောင်းထိုးနိုင် တဲ့ အကြောင်းရင်းက ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက် ရှိမနေခြင်းပါ။ ဘာစနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ် ပြည်သူတွေ ထမင်းဝဖို့ အဓိကလိုအပ်ချက်တစ် ခုလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
ဘာစနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ် ပြည်သူတွေ ကို ထမင်းဝအောင် ကျွေးနိုင်ရင် အုပ်ချုပ်လို့ရ တယ်လို့ အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တိန့်ရှောင်ဖိန်က ပြောခဲ့ဖူးပါ တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ကြည့် မယ်ဆိုရင် ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်နေတယ် လို့ သတ်မှတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
အောက်ခြေပြည်သူတချို့ စကားသံသုံးသပ် ချက်အရ ပြည်သူတွေက ဘာစနစ်၊ ညာစနစ် ဆိုတာတွေ စိတ်ဝင်စားခြင်း မရှိကြတော့ပါဘူး။ ပြည်သူတွေ လိုအပ်နေတာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ဖို့နဲ့ လူမှုစီးပွားရေး ချောင်လည်ဖို့သာ ဖြစ် ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ ရှုပ်ထွေးပွေလီမှု၊ ပါဝင် စွက်ဖက်မှုများတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွား ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေရ တာကို အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ အပါအဝင်၊ တပ်မ တော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အ စည်း၊ ပြည်သူတွေ ကောင်းကောင်းနားလည် သဘောပေါက်ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွဲညီ ညီ ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာ သိ ပါရက်နဲ့ ခုချိန်ထိ သူတစ်လူ ငါတစ်ပေါက်ထင် ရာဖောက်တဲ့ အဆင့်က တက်မလာနိုင်သေးပါ ဘူး။ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး လူမှု ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့သက် ဆိုင်သူအားလုံး သတိချပ်သင့်ပြီလို့ ယူဆမိပါ တယ်။
''ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲကျပ်တည်းနေလား၊ စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ချောင်လည်နေလားသိချင် ရင် အောက်ခြေဆင်းကြည့်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အောက်ခြေပြည်သူတွေ လက် တွေ့ကျကျ ရင်ဆိုင်နေရတာက တစ်နေ့လုပ်တစ် နေ့စားဖို့တောင် မလွယ်ကူတော့ဘူး။ လုပ်တော့ လုပ်နေကြတယ်။ စားတော့ စားနေရတယ်။ ဝမ်း ဝရုံ စားရတယ်ပြောရမှာပေါ့။ လူစဉ်မမီဘူး။ အ ခု မီတာခတွေ တိုးကောက်တယ်။ မီတာခ တိုး တာနဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်တွေ မြင့်လာ မှာပဲ။ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်လာတာနဲ့ အစစအရာ ရာ ဈေးတက်လာမယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ခတွေ ပါ ဈေးတက်လာနိုင်တော့ နဂိုတည်းက လှုပ်မ ရအောင် ကျပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ ဒီထက်ထပ် ကျပ်ရင် အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရကို နောက်တစ်ကြိမ် လှည့်ကြည့်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး''လို့ နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါး ရေးသားနေတဲ့ စာရေးဆရာကြီး စိုင်းကျော်မောင်က သူ့အမြင်ကို ပြောပါတယ်။
တကယ့် ဒီမိုကရေစီဆိုတာ နိုင်ငံရေးသ ဘောတရားအရ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးအတွက် ပြည်သူတွေက တင်မြှောက်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အစိုးရဖြစ်ရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူး။ အဲဒီအစိုးရဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ လက်ငင်းစီးပွားရေး အဆင့်အ တန်းကို အခွင့်အရေးတန်းတူ ရနိုင်တဲ့ အခြေ အထိ မြှင့်တင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှ တ ကယ့်ဒီမိုကရေစီအထိ တက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ ဟာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ပြောစကားလိုတော့ ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိ သေးပါဘူး။ စနစ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားခြင်း မရှိ တော့တဲ့ ပြည်သူနဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ ပြည်သူအ တွက် လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ ပြင်ဆင်မှုကောင်း မလုပ်နိုင်ရင် လာမယ့် ၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးက စိုးရိမ်ရေမှတ် ရောက်မယ်လို့ ထင်မြင်မိ ကြောင်းပါ။
အောငျ့နမျးရအောငျ အစိုးရက ခဈြသူလား
၂ဝ၁၅ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ မတိုငျခငျ က 'ရပျမနပေါနဲ့ ကူ၍ မဲပေးကွပါ' ခေါငျးစဉျ နဲ့ ဆောငျးပါးတဈပုဒျ ရေးခဲ့ဖူးတယျ။ မဲပေးပိုငျ ခှငျ့ရှိသူတိုငျး ကိုယျတိုငျကိုယျကြ မဲရုံရှိရာသှား ပွီး မဲပေးဖို့ တိုကျတှနျးတဲ့ အကွောငျးအရာလေး ပါ။ အပွောငျးအလဲတဈခု ဖျောဆောငျတဲ့နရော မှာ ပွညျသူတှရေဲ့အား အဓိက လိုအပျတာဖွဈ တဲ့အတှကျ ပွညျသူတဈယောကျ အနနေဲ့ရေး သားခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။ အတိုငျးအတာ သကျ ရောကျမှု ဘယျလောကျထိ ရှိတယျဆိုတာ မသိ ပမေယျ့ ဂြာနယျစာမကျြနှာပျေါက စာမူဖတျမိတဲ့ မိတျဆှတေခြို့တော့ ရပျနဖေို့ စိတျကူးတှေ ပွောငျးပွီး မဲရုံရှိရာကို မဲသှားပေးဖွဈတယျလို့ဆို ကွပါတယျ။ ပွောငျးလဲခြိနျတနျပွီဆိုတဲ့ လှိုငျးလုံး ကလညျး ပွညျသူတှကွေားမှာ ကွီးကွီးမားမား ရိုကျခတျမှု ရှိနတေော့ ရပျနမေယျ့ မဲဆန်ဒရှငျအ တျောတျောမြားမြား အပွောငျးအလဲအတှကျ မဲ ပေးကွတာကို တှရေ့ပါတယျ။
သနျးပေါငျးမြားစှာသော ပွညျသူတှရေဲ့ လကျသနျးတှေ မှငျစှနျးမှု အကြိုးရလဒျအဖွဈ NLD ပါတီ တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာသောငျ ပွိုကမျးပွို အနိုငျရပွီး အစိုးရတဈရပျ ဖှဲ့စညျးနိုငျ ခဲ့ပါတယျ။ အခုဆိုရငျ အာဏာရပါတီရဲ့ သကျ တမျးဟာ ၄ နှဈအတှငျး ရောကျရှိနပွေီ ဖွဈပါ တယျ။ ဘကျပေါငျးစုံ အကပျြအတညျးတှကွေားက အစိုးရ တဈရပျ ဖွဈလာတဲ့အတှကျ NLD အစိုးရ အနနေဲ့ အခကျအခဲပေါငျးစုံ ကွုံရမယျ ဆိုတာလညျး မွကွေီးလကျ ခတျမလှဲပါ။ အစိုးရ မှနျသမြှ အခကျအခဲ အကပျြအတညျးက လှတျ ကငျးနတေဲ့ အစိုးရဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကမ်ဘာပျေါ မှာရှိတဲ့ နိုငျငံပေါငျးစုံ အစိုးရမှနျသမြှ စိနျချေါမှုတှနေဲ့ နစေ့ဉျ ရငျဆိုငျနကွေရပါတယျ။ စိနျချေါမှုတှကေို အ ကောငျးဆုံးနဲ့ အသိမျမှဆေုံ့းရငျ ဆိုငျဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ အစိုးရကို ပွညျသူတှကေ အစိုးရကောငျးတဈရပျလို့ သတျမှတျရှုမွငျတတျကွပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံလို နိုငျငံ့ရေးရာကိစ်စရပျတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ရှုပျထှေးပှလေီတဲ့ နိုငျငံမှာ အစိုးရ တဈရပျအဖွဈ ရပျတညျရတာ လှယျကူတဲ့ အ နအေထားတော့ မဟုတျပါဘူး။ တပျမတျော ပါဝငျ အခနျးကဏ်ဍက ကွီးမားနဆေဲ ဖွဈတဲ့အတှကျ အစိုးရနှဈရပျ အုပျခြုပျတဲ့နိုငျငံလို့တောငျ ကမ်ဘာ့ နိုငျငံတှေ သုံးသပျကွပါတယျ။ တိုငျးရငျးသား နယျမွတှေနေဲ့ ပွညျထောငျစု အစိုးရကွားမှာ လညျး ကှဲလှဲတဲ့ သဘောထားတှေ ရှိနသေေးတဲ့ အတှကျ မွနျမာနိုငျငံမှာ အစိုးရတဈရပျ အဖွဈ တာဝနျယူရတွာ<ှကပျွ<ှကပျအိတျ ခေါငျးစှတျပွီး အသကျရှူတယျလို့ ဆိုရမယျ့အတိုငျးပါ။ အသကျ တော့ ရှူရပါတယျ။ စိတျကွိုကျတဈဝလရှေူ ခှငျ့မရတော့ နိုငျငံ့ကနျြးမာရေး အခွအေနကေ ထိုကျသငျ့သလောကျ ကောငျးမှနျတိုးတကျလာ ခွငျး မရှိပါဘူး။ ဘယျလိုအကွောငျးခငျြးရာပဲဖွဈ ဖွဈ အစိုးရတဈရပျအဖွဈ တာဝနျယူမှု ရှိလာပွီ ဆိုရငျတော့ အစိုးရတာဝနျ ကြွေ>ှပနျဖို့ လိုအပျ ပါတယျ။
ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရှိမှ တိုငျးပွညျစီးပှား ရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျအောငျ လုပျနိုငျမယျလို့ ဆို ကွတယျ။ လကျရှိအစိုးရရဲ့ ၄ နှဈတာ သကျတမျး ကို ပွနျကွညျ့မယျဆိုရငျလညျး ငွိမျးခမျြးရေးကိစ်စ တဈစိုကျမတျမတျ ဆောငျရှကျနတော တှနေို့ငျ ပါတယျ။ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရှိမှ တိုငျးပွညျ စီးပှားရေး တိုးတကျအောငျ လုပျဆောငျနိုငျမယျ လို့ အလုံးစုံ လကျခံထားရငျတော့ မွနျမာနိုငျငံ စီးပှားရေးတိုးတကျလာစရာ အကွောငျးမမွငျပါ ဘူး။ ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ စီးပှားရေး တိုးတကျမှုဆကျ စပျမှုရှိတယျဆိုတာ ထိုကျသငျ့သလောကျ လကျ ခံလို့ရပမေယျ့ အလုံးစုံ လကျခံထားတာကိုတော့ အစိုးရ အနနေဲ့ ပွနျလညျသုံးသပျရမယျ့ အပိုငျး လို ဖွဈနပေါတယျ။ ပွညျထောငျစု အစိုးရ၊ တပျ မတျောနဲ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့ အစညျးတှကွေားက အကျကွောငျးတှေ ရငျ ကွားမစသေ့ရှတေ့ော့ အဓိကနဈနာနရေတာက အောကျခွေ ပွညျသူလူထုတှပေါ။
ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရှိမှ တိုငျးပွညျစီးပှား ရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျအောငျ လုပျနိုငျမယျလို့ ဆို ကွတယျ။ လကျရှိအစိုးရရဲ့ ၄ နှဈတာ သကျတမျး ကို ပွနျကွညျ့မယျဆိုရငျလညျး ငွိမျးခမျြးရေးကိစ်စ တဈစိုကျမတျမတျ ဆောငျရှကျနတော တှနေို့ငျ ပါတယျ။ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရှိမှ တိုငျးပွညျ စီးပှားရေး တိုးတကျအောငျ လုပျဆောငျနိုငျမယျ လို့ အလုံးစုံ လကျခံထားရငျတော့ မွနျမာနိုငျငံ စီးပှားရေးတိုးတကျလာစရာ အကွောငျးမမွငျပါ ဘူး။
''ပွီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲ မဲပေးရမယျ့ အခြိနျတုနျးက ကြှနျတျောဆိုကျ ခေါငျမှာ ရောကျနတော။ ကြှနျတျော မဲပေးရမယျ့ စာရငျးက တောငျကွီးက အမတေို့ အိမျထောငျ စုစာရငျးထဲမှာ ပါတယျ။ အပွောငျးအလဲအတှကျ မဲပေးခငျြလို့ ကြှနျတျောတောငျကွီး တကျလာ ပွီး မဲပေးတယျ။ ပေးရမယျ့ မဲရုံကိုလညျး မနကျ အစောကွီးတညျးက ရောကျအောငျ သှားတယျ။ ဘဝမှာ အဲဒီတဈခါ ပထမဆုံး အကွိမျမဲပေးဖူး တာဆိုတော့ ကိုယျပေးခငျြတဲ့ ပါတီကို အမှား အယှငျး မရှိပေးနိုငျအောငျ တျောတျောဂရုစိုကျ ပွီး ပေးခဲ့ရတာပါ။ အပွောငျးအလဲ လိုခငျြလို့ မဲပေးခဲ့တာဗြာ။ လကျရှိ ၄ နှဈအတှငျး မွငျ တှနေ့ရေတဲ့ အနအေထားက ပွညျသူတှအေ တှကျ အပွောငျးအလဲဖွဈအောငျ လုပျနိုငျတာ တဈခုမှ မတှသေ့ေးဘူး။ လာမယျ့ရှေးကောကျ ပှဲကရြငျ ဘယျပါတီကို ယုံစားပွီး မဲပေးရမှနျး တောငျ မသိတော့ဘူး'' လို့ ခှနျအောငျခမျးက သူ့အမွငျကို ပွောပါတယျ။
ပွညျသူတဈယောကျဖွဈတဲ့ ခှနျအောငျခမျး ပွောကွားခကျြအရ နိုငျငံပိုငျ သတငျးစာတှမှော အမွဲလို တှရေ့တဲ့ အစိုးရရဲ့ ပွညျသူ့အတှကျ တဈနှဈတာ ဆိုတဲ့ ကိစ်စရပျတှကေ အမှနျတကယျ ပွညျသူတှအေတှကျ အကြိုးဖွဈထှနျးခွငျး ရှိရဲ့ လားဆိုတာ တှေးတောခငျြ့ခြိနျစရာ ဖွဈလာပါ တယျ။ အခွခေံပွညျသူဆိုတာ အစိုးရတဈရပျ အမွငျလိုတော့ မွငျနိုငျမှာ၊ မွငျတတျမှာ မဟုတျ ပါဘူး။ လကျတှကေ့ကြ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ပွညျ သူတဈယောကျရဲ့ အမွငျအတိုငျးသာ မွငျတတျ ကွတာပါ။ မွနျမာနိုငျငံတဈဝနျး၊ ရှမျးပွညျနယျ တဈခှငျလုံးမှာ ရှိတဲ့ အောကျခွပွေညျသူအား လုံး ဆငျးရဲကပျြတညျးမှုဒဏျကို ခါးစညျးခံ၊ ရငျ ကော့ခံ၊ ခေါငျးငုံ့ခံ၊ မခံခငျြလညျး ခံနရေတာ အားလုံး အသိဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူ ရှေးကောကျ တငျမွှောကျထားတဲ့ ပွောငျးလဲခြိနျတနျပွီ အစိုး ရလကျထကျမှာလညျး ထူးထူးခွားခွား ပွောငျး လဲလာအောငျ လုပျနိုငျခွငျး မတှရေ့သေးပါဘူး။
ဘာစနဈနဲ့ အုပျခြုပျအုပျခြုပျ ပွညျသူတှေ ကို ထမငျးဝအောငျ ကြှေးနိုငျရငျ အုပျခြုပျလို့ရ တယျလို့ အိမျနီးခငျြးတရုတျနိုငျငံရဲ့ ခေါငျးဆောငျ တဈဦးဖွဈတဲ့ တိနျ့ရှောငျဖိနျက ပွောခဲ့ဖူးပါ တယျ။ တရုတျနိုငျငံရဲ့ အုပျခြုပျမှုစနဈကို ကွညျ့ မယျဆိုရငျ ကှနျမွူနဈစနဈနဲ့ အုပျခြုပျနတေယျ လို့ သတျမှတျလို့ ရနိုငျပါတယျ။ စီးပှားရေးပိုငျး ဆိုငျရာမှာတော့ တံခါးဖှငျ့ဝါဒ (Open Market) ကို စနဈတကြ ကငျြ့သုံးတဲ့အတှကျ တရုတျနိုငျငံ ခေါငျးဆောငျတှဟော တရုတျပွညျသူတှကေို ထမငျးဝအောငျ ကြှေးထားနိုငျတာ အနီးစပျဆုံး သကျသေ သာဓကတဈခုလို့ ဆိုရမှာပါ။ တရုတျ ပွညျ အရှိနျအဟုနျနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့နဲ့ အခု လို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ တဈနရောမကျြစောငျးထိုးနိုငျ တဲ့ အကွောငျးရငျးက ပွညျတှငျးစဈမီးတောကျ ရှိမနခွေငျးပါ။ ဘာစနဈနဲ့ အုပျခြုပျအုပျခြုပျ ပွညျသူတှေ ထမငျးဝဖို့ အဓိကလိုအပျခကျြတဈ ခုလို့ ဆိုရပါလိမျ့မယျ။
အောကျခွပွေညျသူတခြို့ စကားသံသုံးသပျ ခကျြအရ ပွညျသူတှကေ ဘာစနဈ၊ ညာစနဈ ဆိုတာတှေ စိတျဝငျစားခွငျး မရှိကွတော့ပါဘူး။ ပွညျသူတှေ လိုအပျနတော တိုငျးပွညျဖှံ့ဖွိုးတိုး တကျဖို့နဲ့ လူမှုစီးပှားရေး ခြောငျလညျဖို့သာ ဖွဈ ပါတယျ။ နိုငျငံရေးအရ ရှုပျထှေးပှလေီမှု၊ ပါဝငျ စှကျဖကျမှုမြားတဲ့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ စီးပှား ရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု နှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာနရေ တာကို အုပျခြုပျသူ အစိုးရ အပါအဝငျ၊ တပျမ တျော၊ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အ စညျး၊ ပွညျသူတှေ ကောငျးကောငျးနားလညျ သဘောပေါကျကွပွီး ဖွဈပါတယျ။ လကျတှဲညီ ညီ ဝိုငျးဝနျးဖွရှေငျးမှ တိုငျးပွညျတိုးတကျမှာ သိ ပါရကျနဲ့ ခုခြိနျထိ သူတဈလူ ငါတဈပေါကျထငျ ရာဖောကျတဲ့ အဆငျ့က တကျမလာနိုငျသေးပါ ဘူး။ တိုငျးရငျးသား ပွညျသူတဈရပျလုံး လူမှု ဘဝ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျအောငျ လုပျဆောငျဖို့သကျ ဆိုငျသူအားလုံး သတိခပျြသငျ့ပွီလို့ ယူဆမိပါ တယျ။
''ပွညျသူတှေ ဆငျးရဲကပျြတညျးနလေား၊ စီး ပှားရေးလုပျငနျးတှေ ခြောငျလညျနလေားသိခငျြ ရငျ အောကျခွဆေငျးကွညျ့တာ အကောငျးဆုံး ဖွဈလိမျ့မယျ။ အောကျခွပွေညျသူတှေ လကျ တှကေ့ကြ ရငျဆိုငျနရေတာက တဈနလေု့ပျတဈ နစေ့ားဖို့တောငျ မလှယျကူတော့ဘူး။ လုပျတော့ လုပျနကွေတယျ။ စားတော့ စားနရေတယျ။ ဝမျး ဝရုံ စားရတယျပွောရမှာပေါ့။ လူစဉျမမီဘူး။ အ ခု မီတာခတှေ တိုးကောကျတယျ။ မီတာခ တိုး တာနဲ့ ထုတျလုပျမှု ကုနျကစြရိတျတှေ မွငျ့လာ မှာပဲ။ ကုနျကစြရိတျ မွငျ့လာတာနဲ့ အစစအရာ ရာ စြေးတကျလာမယျ။ သယျယူပို့ဆောငျခတှေ ပါ စြေးတကျလာနိုငျတော့ နဂိုတညျးက လှုပျမ ရအောငျ ကပျြနတေဲ့ ပွညျသူတှေ ဒီထကျထပျ ကပျြရငျ အုပျခြုပျသူ အစိုးရကို နောကျတဈကွိမျ လှညျ့ကွညျ့မှာ မဟုတျတော့ဘူး''လို့ နိုငျငံရေး ဆောငျးပါး ရေးသားနတေဲ့ စာရေးဆရာကွီး စိုငျးကြျောမောငျက သူ့အမွငျကို ပွောပါတယျ။
တကယျ့ ဒီမိုကရစေီဆိုတာ နိုငျငံရေးသ ဘောတရားအရ ပွညျသူတှရေဲ့ အကြိုးအတှကျ ပွညျသူတှကေ တငျမွှောကျတဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ အစိုးရဖွဈရုံနဲ့ မပွီးသေးဘူး။ အဲဒီအစိုးရဟာ ပွညျသူတှရေဲ့ လကျငငျးစီးပှားရေး အဆငျ့အ တနျးကို အခှငျ့အရေးတနျးတူ ရနိုငျတဲ့ အခွေ အထိ မွှငျ့တငျနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျပေးမှ တ ကယျ့ဒီမိုကရစေီအထိ တကျလှမျးနိုငျမယျလို့ လှတျလပျရေး ဖခငျကွီး ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ လကျရှိမွနျမာနိုငျငံ အစိုးရ ဟာ ဒီမိုကရစေီ စနဈကို လြှောကျလှမျးနတေဲ့ အစိုးရတဈရပျ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဗိုလျခြုပျ ပွောစကားလိုတော့ ဖျောဆောငျနိုငျခွငျး မရှိ သေးပါဘူး။ စနဈဆိုတာ စိတျဝငျစားခွငျး မရှိ တော့တဲ့ ပွညျသူနဲ့ ဆငျးရဲမှဲတတေဲ့ ပွညျသူအ တှကျ လကျရှိအစိုးရအနနေဲ့ ပွငျဆငျမှုကောငျး မလုပျနိုငျရငျ လာမယျ့ ၂ဝ၂ဝ ရှေးကောကျပှဲ ကွီးက စိုးရိမျရမှေတျ ရောကျမယျလို့ ထငျမွငျမိ ကွောငျးပါ။
ပညာရေးစုံညီပှဲတျော ကငျြးပရာတှငျ ကြောငျးသား/မိဘမြားထံမှ ငှကွေေး ကောကျခံပါက အရေးယူမညျ
စိုငျးရာဇာ . ရှမျးပွညျနယျအတှငျးရှိ အခွခေံ ပညာကြောငျးမြားအား ပညာရေးစုံ ညီပှဲတျော ကငျြးပနိုငျရနျအတှကျ ထောကျပံ့ငှမြေား ခထြားပေးမညျဖွစ...
တောငျကွီးမွို့၊ မငျးကြောငျးပရိယတ်တိစာသငျတိုကျမှ ကိုရငျတဈပါး ပွငျးထနျစှာ ရိုကျနှကျခံရ
စုလှိုငျ . ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး၊ တောငျကွီးမွို့၊ ကနျအောကျရပျကှကျ၊ မငျးကြောငျးပရိယတ်တိစာသငျတိုကျတှငျ သီတငျးသုံး နထေိုငျသော ကိုရငျ...
တောငျကွီးမွို့ရှိ 199 Call Center သို့ ဖုနျးဆကျတိုငျကွားမှု ၁၅ မှုသာ ရှိသေး
စုလှိုငျ . တောငျကွီးမွို့ရှိ ရှမျးပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး၌ တပျဆငျထားသညျ့ အရေးပျေါ တယျလီဖုနျး ဆကျသှယျ ရေးနံပါတျ 199 Call Center က...
ရှမျးရှတှေ့ငျ ပွောငျးအထှကျနှုနျး ကောငျးသျောလညျး ဈေးနှုနျး ကဆြငျး၍ တောငျသူမြား အခကျတှနေ့ေ
ထကျတိုငျးကြျော . ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျး၊ ကြိုငျးတုံဒသေတှငျ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပွောငျး စိုကျရာသီခြိနျအတှငျး စိုကျပြိုးထှကျ ရှိသော ပွောငျးသီ...
အောငျပနျးတှငျ ဆိုငျကယျ အစီး ၂၀ ကြျောအား တဈကိုယျတျော ခိုးယူသူကို ဖမျးမိ
မငျးဇျောမငျး . ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး၊ ကလောမွို့နယျ၊ အောငျပနျးမွို့တှငျ ဒီဇငျဘာလ ၄ ရကျက နရောစုံမှ မျောတျောဆိုငျကယျ အစီး ၂၀ ကြျောအ...
Archive Dec 10 (5) Dec 09 (4) Dec 08 (6) Dec 07 (7) Dec 06 (11) Dec 05 (11) Dec 04 (9) Dec 03 (7) Dec 02 (5) Dec 01 (4) Nov 30 (7) Nov 29 (10) Nov 28 (9) Nov 27 (7) Nov 26 (6) Nov 25 (5) Nov 24 (7) Nov 23 (6) Nov 22 (8) Nov 21 (8) Nov 20 (7) Nov 19 (3) Nov 18 (5) Nov 17 (7) Nov 16 (6) Nov 15 (5) Nov 14 (6) Nov 13 (6) Nov 11 (1) Nov 10 (1) Nov 09 (6) Nov 08 (8) Nov 07 (4) Nov 06 (4) Nov 05 (3) Nov 04 (4) Nov 03 (5) Nov 02 (2) Nov 01 (5) Oct 31 (7) Oct 30 (6) Oct 29 (4) Oct 28 (3) Oct 27 (8) Oct 26 (4) Oct 25 (5) Oct 24 (13) Oct 23 (6) Oct 22 (8) Oct 21 (1) Oct 20 (7) Oct 19 (6) Oct 18 (9) Oct 17 (5) Oct 16 (5) Oct 15 (2) Oct 14 (6) Oct 13 (9) Oct 12 (3) Oct 11 (7) Oct 10 (7) Oct 09 (11) Oct 08 (7) Oct 07 (6) Oct 06 (2) Oct 05 (9) Oct 04 (5) Oct 03 (14) Oct 02 (8) Oct 01 (9) Sep 30 (4) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 25 (15) Sep 24 (9) Sep 23 (3) Sep 22 (6) Sep 21 (10) Sep 20 (10) Sep 19 (9) Sep 18 (10) Sep 17 (7) Sep 16 (5) Sep 15 (7) Sep 14 (10) Sep 13 (8) Sep 12 (10) Sep 11 (10) Sep 10 (9) Sep 09 (5) Sep 08 (9) Sep 07 (7) Sep 06 (8) Sep 05 (12) Sep 04 (11) Sep 03 (8) Sep 02 (4) Sep 01 (4) Aug 31 (8) Aug 30 (9) Aug 29 (12) Aug 28 (11) Aug 27 (8) Aug 26 (9) Aug 25 (8) Aug 24 (9) Aug 23 (9) Aug 22 (15) Aug 21 (7) Aug 20 (6) Aug 19 (6) Aug 18 (13) Aug 17 (8) Aug 16 (11) Aug 15 (2) Aug 14 (7) Aug 13 (4) Aug 12 (8) Aug 11 (7) Aug 10 (9) Aug 09 (7) Aug 08 (10) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (8) Aug 04 (8) Aug 03 (7) Aug 02 (12) Aug 01 (15) Jul 31 (6) Jul 30 (12) Jul 29 (6) Jul 28 (11) Jul 27 (10) Jul 26 (13) Jul 25 (13) Jul 24 (11) Jul 23 (9) Jul 22 (5) Jul 21 (14) Jul 20 (15) Jul 19 (11) Jul 18 (8) Jul 17 (9) Jul 16 (9) Jul 15 (10) Jul 14 (12) Jul 13 (11) Jul 12 (13) Jul 11 (13) Jul 10 (6) Jul 09 (3) Jul 08 (4) Jul 07 (6) Jul 06 (8) Jul 05 (7) Jul 04 (4) Jul 03 (5) Jul 02 (3) Jul 01 (2) Jun 28 (3) Jun 27 (8) Jun 26 (5) Jun 25 (6) Jun 24 (4) Jun 23 (5) Jun 22 (2) Jun 21 (6) Jun 20 (10) Jun 19 (8) Jun 18 (10) Jun 17 (2) Jun 15 (6) Jun 14 (2) Jun 13 (4) Jun 12 (5) Jun 11 (3) Jun 10 (4) Jun 08 (5) Jun 07 (7) Jun 06 (5) Jun 05 (3) Jun 04 (3) Jun 03 (5) Jun 02 (3) May 31 (4) May 30 (10) May 29 (8) May 28 (7) May 27 (2) May 26 (1) May 25 (5) May 24 (5) May 23 (7) May 22 (6) May 21 (5) May 19 (4) May 18 (13) May 17 (3) May 16 (9) May 15 (10) May 14 (7) May 13 (6) May 12 (5) May 11 (7) May 10 (1) May 09 (5) May 08 (3) May 07 (5) May 06 (5) May 05 (6) May 04 (4) May 03 (3) May 02 (9) May 01 (9) Apr 30 (7) Apr 29 (7) Apr 28 (3) Apr 27 (7) Apr 26 (9) Apr 25 (10) Apr 24 (7) Apr 23 (1) Apr 22 (8) Apr 21 (4) Apr 20 (3) Apr 19 (4) Apr 18 (7) Apr 17 (7) Apr 15 (6) Apr 14 (2) Apr 13 (5) Apr 12 (5) Apr 11 (8) Apr 10 (7) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (1) Apr 06 (7) Apr 05 (6) Apr 04 (9) Apr 03 (6) Apr 02 (8) Mar 31 (6) Mar 30 (5) Mar 29 (7) Mar 28 (8) Mar 27 (7) Mar 26 (11) Mar 25 (6) Mar 24 (4) Mar 23 (9) Mar 22 (4) Mar 21 (4) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (6) Mar 17 (4) Mar 16 (5) Mar 15 (12) Mar 14 (11) Mar 13 (8) Mar 12 (5) Mar 11 (10) Mar 10 (4) Mar 09 (11) Mar 08 (8) Mar 07 (13) Mar 06 (3) Mar 05 (4) Mar 04 (6) Mar 03 (1) Mar 02 (2) Mar 01 (10) Feb 28 (11) Feb 26 (5) Feb 25 (5) Feb 24 (11) Feb 23 (2) Feb 22 (9) Feb 21 (4) Feb 20 (4) Feb 19 (4) Feb 18 (3) Feb 17 (7) Feb 16 (11) Feb 15 (5) Feb 14 (8) Feb 13 (12) Feb 12 (8) Feb 11 (8) Feb 10 (1) Feb 09 (8) Feb 08 (9) Feb 07 (10) Feb 06 (11) Feb 05 (7) Feb 04 (8) Feb 03 (4) Feb 02 (9) Feb 01 (6) Jan 31 (8) Jan 30 (6) Jan 29 (4) Jan 28 (6) Jan 27 (5) Jan 26 (6) Jan 25 (6) Jan 24 (14) Jan 23 (9) Jan 22 (7) Jan 21 (5) Jan 20 (6) Jan 19 (12) Jan 18 (9) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (5) Jan 14 (6) Jan 13 (4) Jan 12 (5) Jan 11 (9) Jan 10 (10) Jan 09 (6) Jan 08 (6) Jan 07 (7) Jan 06 (6) Jan 05 (7) Jan 04 (8) Jan 03 (12) Jan 02 (11) Dec 31 (13) Dec 30 (8) Dec 29 (10) Dec 28 (7) Dec 27 (11) Dec 26 (3) Dec 25 (10) Dec 24 (14) Dec 23 (5) Dec 22 (7) Dec 21 (7) Dec 20 (9) Dec 19 (7) Dec 18 (5) Dec 17 (7) Dec 16 (3) Dec 15 (6) Dec 14 (12) Dec 13 (10) Dec 12 (7) Dec 11 (17) Dec 10 (12) Dec 09 (5) Dec 08 (6) Dec 07 (10) Dec 06 (14) Dec 05 (8) Dec 04 (5) Dec 03 (10) Dec 02 (6) Dec 01 (11) Nov 30 (10) Nov 29 (8) Nov 28 (12) Nov 27 (2) Nov 26 (8) Nov 25 (5) Nov 24 (5) Nov 23 (4) Nov 22 (1) Nov 21 (18) Nov 20 (10) Nov 19 (8) Nov 18 (2) Nov 17 (8) Nov 16 (17) Nov 15 (11) Nov 14 (5) Nov 13 (2) Nov 12 (3) Nov 11 (9) Nov 10 (15) Nov 09 (12) Nov 08 (5) Nov 07 (3) Nov 06 (5) Nov 05 (6) Nov 04 (2) Nov 03 (8) Nov 02 (7) Nov 01 (8) Oct 30 (9) Oct 29 (10) Oct 28 (7) Oct 27 (8) Oct 26 (10) Oct 25 (3) Oct 24 (5) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (3) Oct 20 (5) Oct 19 (4) Oct 18 (12) Oct 17 (5) Oct 16 (11) Oct 15 (8) Oct 14 (5) Oct 13 (10) Oct 12 (12) Oct 11 (13) Oct 10 (3) Oct 09 (7) Oct 08 (5) Oct 07 (4) Oct 06 (3) Oct 05 (6) Oct 04 (16) Oct 03 (4) Oct 02 (6) Oct 01 (6) Sep 30 (2) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 26 (9) Sep 25 (9) Sep 24 (6) Sep 23 (4) Sep 22 (10) Sep 21 (4) Sep 20 (5) Sep 19 (14) Sep 18 (13) Sep 17 (10) Sep 15 (1) Sep 14 (9) Sep 13 (1) Sep 12 (9) Sep 11 (5) Sep 10 (6) Sep 09 (5) Sep 08 (6) Sep 07 (8) Sep 06 (8) Sep 05 (6) Sep 04 (8) Sep 03 (10) Sep 02 (4) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (9) Aug 29 (11) Aug 28 (4) Aug 27 (7) Aug 26 (4) Aug 25 (6) Aug 24 (7) Aug 23 (10) Aug 22 (10) Aug 21 (8) Aug 20 (6) Aug 19 (8) Aug 18 (9) Aug 17 (16) Aug 16 (10) Aug 15 (1) Aug 14 (9) Aug 13 (6) Aug 12 (5) Aug 11 (12) Aug 10 (13) Aug 09 (16) Aug 08 (6) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (9) Aug 04 (13) Aug 03 (11) Aug 02 (15) Aug 01 (8) Jul 31 (7) Jul 30 (3) Jul 29 (8) Jul 28 (12) Jul 27 (10) Jul 26 (14) Jul 25 (7) Jul 24 (5) Jul 23 (7) Jul 22 (5) Jul 21 (12) Jul 20 (12) Jul 19 (5) Jul 18 (6) Jul 17 (4) Jul 16 (9) Jul 15 (1) Jul 14 (3) Jul 13 (5) Jul 12 (13) Jul 11 (6) Jul 10 (5) Jul 09 (10) Jul 08 (3) Jul 07 (13) Jul 06 (12) Jul 05 (13) Jul 03 (12) Jul 02 (5) Jun 30 (11) Jun 29 (9) Jun 28 (13) Jun 27 (2) Jun 26 (1) Jun 25 (7) Jun 24 (6) Jun 23 (12) Jun 22 (12) Jun 21 (15) Jun 20 (6) Jun 19 (3) Jun 18 (10) Jun 17 (4) Jun 16 (5) Jun 15 (8) Jun 14 (12) Jun 13 (9) Jun 12 (4) Jun 11 (8) Jun 10 (4) Jun 09 (7) Jun 08 (17) Jun 07 (13) Jun 06 (9) Jun 05 (8) Jun 04 (5) Jun 03 (5) Jun 02 (6) Jun 01 (10) May 31 (6) May 30 (4) May 28 (13) May 26 (7) May 25 (3) May 24 (8) May 23 (8) May 22 (10) May 21 (6) May 20 (6) May 19 (6) May 18 (7) May 17 (16) May 16 (8) May 15 (10) May 14 (10) May 13 (7) May 12 (7) May 11 (6) May 10 (15) May 09 (7) May 08 (11) May 07 (4) May 06 (5) May 05 (4) May 04 (6) May 03 (13) May 02 (5) May 01 (5) Apr 30 (19) Apr 29 (4) Apr 28 (8) Apr 27 (8) Apr 26 (14) Apr 25 (6) Apr 24 (11) Apr 23 (9) Apr 22 (3) Apr 21 (4) Apr 20 (7) Apr 19 (9) Apr 17 (5) Apr 16 (1) Apr 14 (3) Apr 13 (7) Apr 12 (11) Apr 11 (6) Apr 10 (10) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (7) Apr 06 (8) Apr 05 (11) Apr 04 (11) Apr 03 (9) Apr 02 (7) Apr 01 (6) Mar 31 (8) Mar 30 (11) Mar 29 (8) Mar 28 (11) Mar 27 (9) Mar 26 (8) Mar 25 (6) Mar 24 (8) Mar 23 (15) Mar 22 (8) Mar 21 (7) Mar 20 (11) Mar 19 (11) Mar 18 (5) Mar 17 (9) Mar 16 (15) Mar 15 (12) Mar 14 (10) Mar 13 (15) Mar 12 (8) Mar 11 (5) Mar 10 (13) Mar 09 (6) Mar 08 (13) Mar 07 (10) Mar 06 (11) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (9) Mar 01 (6) Feb 28 (11) Feb 27 (15) Feb 26 (14) Feb 25 (4) Feb 24 (10) Feb 23 (9) Feb 22 (14) Feb 21 (11) Feb 20 (16) Feb 19 (11) Feb 18 (6) Feb 17 (10) Feb 16 (13) Feb 15 (14) Feb 14 (9) Feb 13 (12) Feb 12 (11) Feb 11 (7) Feb 10 (8) Feb 09 (10) Feb 08 (15) Feb 07 (11) Feb 06 (6) Feb 05 (5) Feb 04 (6) Feb 03 (4) Feb 02 (7) Feb 01 (10) Jan 31 (9) Jan 30 (4) Jan 29 (8) Jan 27 (10) Jan 26 (11) Jan 25 (9) Jan 24 (7) Jan 23 (9) Jan 22 (8) Jan 21 (5) Jan 20 (8) Jan 19 (6) Jan 18 (10) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (15) Jan 14 (8) Jan 13 (6) Jan 12 (10) Jan 11 (11) Jan 10 (13) Jan 09 (9) Jan 08 (1) Jan 07 (5) Jan 06 (8) Jan 05 (9) Jan 04 (8) Jan 03 (8) Jan 02 (5) Jan 01 (8) Dec 31 (3) Dec 30 (4) Dec 29 (5) Dec 28 (4) Dec 27 (4) Dec 26 (6) Dec 25 (7) Dec 24 (4) Dec 23 (5) Dec 22 (10) Dec 21 (10) Dec 20 (6) Dec 19 (7) Dec 18 (8) Dec 17 (3) Dec 16 (9) Dec 15 (8) Dec 14 (10) Dec 13 (6) Dec 12 (10) Dec 11 (6) Dec 10 (7) Dec 09 (3) Dec 08 (5) Dec 07 (12) Dec 06 (10) Dec 05 (11) Dec 04 (6) Dec 03 (4) Dec 02 (9) Dec 01 (7) Nov 30 (9) Nov 29 (6) Nov 28 (5) Nov 27 (8) Nov 26 (6) Nov 25 (6) Nov 24 (10) Nov 23 (8) Nov 22 (10) Nov 21 (10) Nov 20 (7) Nov 19 (5) Nov 18 (7) Nov 17 (8) Nov 16 (14) Nov 15 (8) Nov 14 (9) Nov 13 (10) Nov 12 (7) Nov 11 (7) Nov 10 (10) Nov 09 (9) Nov 08 (7) Nov 07 (7) Nov 06 (6) Nov 05 (4) Nov 04 (6) Nov 03 (8) Nov 02 (8) Nov 01 (8) Oct 31 (7) Oct 30 (5) Oct 29 (6) Oct 28 (6) Oct 27 (8) Oct 26 (11) Oct 25 (7) Oct 24 (4) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (8) Oct 20 (8) Oct 19 (5) Oct 18 (5) Oct 17 (4) Oct 16 (7) Oct 15 (5) Oct 14 (4) Oct 13 (5) Oct 12 (10) Oct 11 (9) Oct 10 (5) Oct 09 (1) Oct 08 (5) Oct 07 (7) Oct 06 (6) Oct 05 (7) Oct 04 (5) Oct 03 (6) Oct 02 (5) Oct 01 (6) Sep 30 (4) Sep 29 (5) Sep 28 (1) Sep 27 (5) Sep 26 (11) Sep 25 (6) Sep 24 (4) Sep 23 (8) Sep 22 (6) Sep 21 (5) Sep 20 (6) Sep 19 (5) Sep 18 (9) Sep 17 (8) Sep 16 (6) Sep 15 (7) Sep 14 (9) Sep 13 (9) Sep 12 (10) Sep 11 (9) Sep 10 (5) Sep 09 (8) Sep 08 (10) Sep 07 (8) Sep 06 (10) Sep 05 (4) Sep 04 (10) Sep 03 (7) Sep 02 (7) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (8) Aug 29 (9) Aug 28 (10) Aug 27 (5) Aug 26 (3) Aug 25 (8) Aug 24 (8) Aug 23 (9) Aug 22 (8) Aug 21 (12) Aug 20 (8) Aug 19 (8) Aug 18 (10) Aug 17 (10) Aug 16 (10) Aug 15 (10) Aug 14 (12) Aug 13 (9) Aug 12 (9) Aug 11 (10) Aug 10 (13) Aug 09 (9) Aug 08 (13) Aug 07 (13) Aug 06 (3) Aug 05 (12) Aug 04 (11) Aug 03 (11) Aug 02 (10) Aug 01 (11) Jul 31 (11) Jul 30 (7) Jul 29 (9) Jul 28 (9) Jul 27 (10) Jul 26 (8) Jul 25 (10) Jul 24 (7) Jul 23 (6) Jul 22 (8) Jul 21 (10) Jul 20 (12) Jul 19 (6) Jul 18 (6) Jul 17 (8) Jul 16 (7) Jul 15 (10) Jul 14 (11) Jul 13 (12) Jul 12 (10) Jul 11 (8) Jul 10 (13) Jul 09 (1) Jul 08 (11) Jul 07 (9) Jul 06 (12) Jul 05 (9) Jul 04 (8) Jul 03 (7) Jul 02 (7) Jul 01 (7) Jun 30 (6) Jun 29 (8) Jun 28 (7) Jun 27 (11) Jun 26 (10) Jun 25 (10) Jun 24 (9) Jun 23 (13) Jun 22 (9) Jun 21 (9) Jun 20 (9) Jun 19 (10) Jun 18 (5) Jun 17 (12) Jun 16 (11) Jun 15 (14) Jun 14 (9) Jun 13 (13) Jun 12 (14) Jun 11 (10) Jun 10 (14) Jun 09 (10) Jun 08 (17) Jun 07 (10) Jun 06 (15) Jun 05 (11) Jun 04 (9) Jun 03 (11) Jun 02 (10) Jun 01 (16) May 31 (14) May 30 (13) May 29 (14) May 28 (9) May 27 (18) May 26 (16) May 25 (24) May 24 (10) May 23 (9) May 22 (16) May 21 (8) May 20 (9) May 19 (9) May 18 (10) May 17 (13) May 16 (12) May 15 (10) May 14 (8) May 13 (5) May 12 (10) May 11 (10) May 10 (14) May 09 (10) May 08 (7) May 07 (12) May 06 (6) May 05 (11) May 04 (14) May 03 (3) May 02 (13) May 01 (16) Apr 30 (7) Apr 29 (11) Apr 28 (10) Apr 27 (8) Apr 26 (11) Apr 25 (9) Apr 24 (7) Apr 23 (5) Apr 22 (8) Apr 21 (7) Apr 20 (10) Apr 19 (11) Apr 18 (9) Apr 17 (3) Apr 16 (5) Apr 15 (6) Apr 14 (7) Apr 13 (6) Apr 12 (12) Apr 11 (12) Apr 10 (11) Apr 09 (12) Apr 08 (11) Apr 07 (14) Apr 06 (12) Apr 05 (12) Apr 04 (13) Apr 03 (13) Apr 02 (8) Apr 01 (4) Mar 31 (8) Mar 30 (9) Mar 29 (12) Mar 28 (14) Mar 27 (20) Mar 26 (7) Mar 25 (14) Mar 24 (13) Mar 23 (15) Mar 22 (18) Mar 21 (12) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (12) Mar 17 (11) Mar 16 (14) Mar 15 (9) Mar 14 (15) Mar 13 (17) Mar 12 (10) Mar 11 (15) Mar 10 (9) Mar 09 (13) Mar 08 (12) Mar 07 (11) Mar 06 (16) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (12) Mar 02 (10) Mar 01 (6) Feb 28 (2) Feb 27 (4) Feb 26 (7) Feb 25 (3) Feb 24 (5)